प्रेरक प्रसंग : राजा कहाँ किसानले ल्याउने दुध कसरी पातलो ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रेरक प्रसंग : राजा कहाँ किसानले ल्याउने दुध कसरी पातलो ?
साउन २६ गते, २०७६ - १६:२६
काठमाडौं । एकादेशमा एक राजाले निरन्तर एउटै किसानबाट दुध लिंदै आएका थिए । किसानले पनि राजालाई राम्रो र गुणस्तरको दुध दिंदै आएको थियो । तर, एक समय किसानले ल्याएको दुध पातलो हुँदै जान थाल्यो ।
राजाले किसानलाई दुध पातलो आउनु कारणबारे सोधे । किसानले ऋतु फेरिएसँगै घाँसपातमा नयाँ पालुवा पलाएकाले वस्तुले नै दुध पातलो दिएको बतायो । तर राजालाई किसानको जवाफ पत्यार लागेन । राजाले शंका लागेर सत्य तथ्य बुझ्न एकजना गुप्तचर खटाए । गुप्तचरले पालुवा पलाएको धाँस खाएको बस्तुले दुध पातलो दिनेकुरा सत्य रहेको प्रतिवेदन राजालाई बुझायो ।
राजालाई दुध झन् पातलो हुँदै गए जस्तो लाग्यो । र, एक दिन फेरि अर्को एक जनालाई अनुगमनका लागि खटाए । दोस्रो व्यक्तिबाट पनि प्रतिवेदनमा पूर्ववत् निश्कर्ष आयो । घाँसको पालुवा नै दुध पातलो हुनुको कारण भएको जानकारी आयो ।
राजा छक्क परे, पालुवा पनि छिप्पिंदै गए । सबैको रिपोर्ट एउटै छ तर, दुध झन–झन पातलो छ । राजा एकदिन आफैं भेष बदलेर अनुगमनमा निस्किए । जाँदै गर्दा ईनार छेउ तीन जना मान्छे देखेर हेर्दा त दुधवाला किसानले गुप्तचर र अनुगमनकर्तालाई एक–एक भाडो दुध दिएर त्यति नै पानी मिसाएको देखे ।
राजा केही नबोली फर्किए । किसान दुध लिएर आयो। राजाले किसानलाई एकान्तमा लगेर यथार्थ बताउन भने । ‘म ईमान्दार किसान महाराजसँग कसरी झुठ बोल्थेंर हजुर, हजुरबाट खटाइएकै मान्छेले मलाई त्यसो गर्न भने, मैले त्यसो गर्नु पाप हो भनी प्रतिकार गर्दा उल्टै दुधमा पानी मिसाएको भनी प्रतिवेदन दिएर राजाबाट सजाएँ दिलाउने धम्की दिए । म डरले यसो गर्न बाध्य भएँ हजुर !’ किसानले विनम्रता पूर्वक विन्ति बिसायो ।
राजाले दुबै प्रतिवेदन पुनः पढे, किसानको सुरुको जवाफ र अहिलेको बयान विचार गरे। गल्ती कतै कसैको छैन । किसानले सत्य बोलेको छ, त्यहीकुरा दुवै प्रतिवेदनमा स्वीकार गरिएको छ । तर दुध झनझन पातलिदै गएको छ । स्राेत : सामाजिक सञ्जाल
साउन २६ गते, २०७६ - १६:२६ मा प्रकाशित